OTU ESI EME OTU OTU VKONTAKTE - VKONTAKTE - 2019
Ihe fọrọ nke nta ka onye ọrụ Instagram ọ bụla chọọ ime ka akaụntụ ya mara mma. Iji mepụta akwụkwọ okike n'ezie nke ụlọ ahịa ntanetị kachasị ewu ewu, ndị nwe akaụntụ na-ebipụta mosaics mgbe niile. Ọ ga-adị ka ọrụ ọrụ dị otú ahụ na-ewe ogologo oge, mana n'eziokwu, ọ bụghị. Isiokwu a ga-enye nhọrọ maka ịrụ ọrụ a.
Ịmepụta mosaic maka Instagram
Ndị editọ editọ dị iche iche, dị ka Photoshop na GIMP, ga-enyere aka kee ihe oyiyi ahụ. Iji ọrụ nlekọta weebụ pụrụ iche, nke a ga-ekwe omume n'ebughị ụzọ wụnye mmemme na diski ike. Usoro usoro nke usoro nke ọ bụla na-egosi nrụgide dị iche iche nke ihe oyiyi ahụ ma ọ bụ nhọrọ ya.
Usoro 1: Photoshop
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na onye ọkachamara na-eme ihe ntanetị Photoshop nwere ike imezu ọrụ ahụ. Ngalaba nke usoro ihe omume ahụ na-enye gị ohere iweghasị mgbagwoju anya na pixel ziri ezi. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na mgbagwoju anya dị oke, ị nwere ike ịkọwa nke ya site na ọnụ ọgụgụ dị na akara kwekọrọ. N'ozuzu, usoro a kachasị mma maka ndị ọrụ toro eto na ndị na-abụghị nke mbụ iji nchịkọta akụkọ.
Mbụ ịkwesịrị ịgbakwunye foto ahụ n'onwe ya na Spacepace.
Na nchịkọta nhọrọ na mpaghara Na-edezi ga-ahọrọ "Ntọala", na n'isi ya "Ntuziaka, ntutu, na iberibe ...". Ị ga-ahụ windo nke ị nwere ike ịgbanwe ụfọdụ mpaghara.
Na ngọngọ "Grid" ndokwa nke esemokwu na anya ha na ibe ha na centimeters ma ọ bụ pixels gbanwere. Mgbe ị kpebisiri ike ịhụ ebe dị anya, ịnwere ike ịgbakwunye ma ọ bụ wepụ ya. Ụkpụrụ, n'ezie, dabere na àgwà nke foto na ọchịchọ gị.
Ọzọ, ịkwesịrị ịhọrọ aka ibelata mkpịsị aka gị ma detuo ya na ọkwa ọhụrụ.
Kwuo ihe oyiyi ahụ, ịchọrọ ịchekwa ya dị ka faịlụ dị iche. Ya mere, ọ dị mkpa iji ihe niile ahụ mebie.
Usoro 2: GIMP
Onye nyocha foto GIMP ga-anagidekwa ọrụ a. Nhọrọ ga - eme ka ị gbanwee ọnọdụ nke grid na onyinyo ahụ maka nkebi nke na - esote n'ime ihe. Ihe bara uru gụnyere ihe ndị a: ọ bụrụ na ihe osise ahụ dị na ihe atụ ahụ bụ ihe na-adịghị mma, mgbe ahụ ọ nwere ike idozi ya maka oke "Intervals". Oghere ntọala ntakịrị na-enye gị ohere ịhụ nsonaazụ mgbanwe ndị a gbanwere.
Dụgharịa oyiyi dị gị mkpa n'etiti etiti ọrụ ngwa ngwa.
Ọzọ ịkwesịrị itinye akọrọ na ngalaba ahụ "Lee" na nhọrọ dị ka Gosi Grid ma "Nọgide na okporo".
Iji mepee windo ahụ na mpaghara, ịkwesịrị ịpị mpaghara ahụ "Foto"wee họrọ "Hazie okporo ...".
N'oge a, enwere ohere iji gbanwee nhọrọ ọzọ, dị ka agba nke edoghi, oke na ndị ọzọ.
Mgbe ịmechara mgbanwe niile, ịkwesịrị ịmepụta ihe ọ bụla dị iche iche iji zọpụta ya na faịlụ dị iche na draịvụ diski gị, dịka dị na mbipute gara aga.
Usoro 3: GriddRawingTool Service
A na-ahazi ọrụ weebụ a maka isiokwu ndị dị oke dịka ihe e kere eke. Nhọrọ ahụ zuru okè maka ndị na-amaghị ndị editọ graphic. Ntuzi ntughari site na nkwụsị ga-enyekwa aka dozie onyinyo ahụ, belata ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Nchịkọta foto ntanetị dị mfe n'ihi na ọ na-ewepu ntinye nke ngwanrọ pụrụ iche na kọmputa.
Gaa na GriddRawingTool
Ịnwere ike itinye ihe oyiyi site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Họrọ faịlụ".
Anyị ga-aga n'ọzọ ọzọ.
Lee ọkachamara na - agwa gị ka ị gbanwee onyinyo ahụ ma achọọ.
O nwere ike iburu na ị na-akụ foto, nzọụkwụ a bụ nke a.
A ga-atụnyekwa ya iji dozie ihe oyiyi ahụ.
Na nzọụkwụ ikpeazụ, ọrụ ahụ na-enye ntọala maka mgbagwoju anya. Okwesiri ikwuputa ntughari uzo na pixels, agba ya na onu ogugu ndi ozo. Bọtịnụ "Tinye Grid" na-emetụta mmezi oyiyi niile.
Mgbe ihe niile mechara, ọ na-anọgide na pịa "Download" maka nbudata.
Dị ka a pụrụ ịhụ na omume, ịmepụta ihe dị mfe abụghị ihe siri ike, na-agbaso nzọụkwụ site nzọụkwụ ntụziaka. Ọzọkwa, gị onwe gị kpebiri ihe omume ma ọ bụ ọrụ kachasị mfe ime. Nhọrọ ndị e nyere n'isiokwu ahụ ga-enye aka nye creativity na akaụntụ Instagram gị ma gosi ndị enyi gị.